9 Fomba Fiainana Amin'Ny Fianaram-pianakaviana SEO Een Boost Te Geven
Ny Internet dia mahazatra hatrany, raha toa ka mampiasa ny olona indrindra ny olona, ​​dia voamarina fa voamarina ny pejy voalohany amin'ny Google findings (na ny karazana fikarohana hafa). Eto an-toerana, ny orinasa dia tokony hampidirina amin'ny sehatra SEO-Campagne amin'ny pay-per-click-advertentie. Raha jerena ny SEO, dia nomarihina tsara ny toerana misy azy.
Michael Brown, mpitantana ny Customer Success Manager Semalt dia nanapa-kevitra mba hanampy amin'ny seo-strategie.
Eritrereto hoe ny tranonkala finday dia
Nisy olona maro mampiasa ny findainy mba hikatsahana ny fialam-boly sy ny asa hafa. Izany dia mampiseho fa ny tranokalanao dia mila navigateur - na tsy misy solosaina, na telefaon na tablette. Mankanesa aty amin'ny avo indrindra amin'ny mpikarakara ny mpikarakara ny Google.
Ampiasao ny webdesign
Mitombo ny haavon'ny pejy
Manome kely ireo singa mifandraika
Atsaharo ny flash animation
Tsy azo atao ny miangona ary tsy misy dikany ny atidoha
Ny famoronana sehatra dia nihaona tamin'ny teny anglisy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Raha ny marina, raha ny tokony ho izy dia ny mandeha amin'ny taxi-na mankany amin'ny fiarovana ny fiainana an-trano dia tsy afaka ny ho tonga fotsiny, fa tsy ny fahazoan-dàlana hitrandraka.
Ny fananganana toeram-ponenana any Londres dia ny fanamafisana ny "londres" ho an'ny lozam-pifamoivoizana any Parisy any Londres.
Mampiasa media sosialy
Ny haino aman-jery sosialy dia mametraka rafitra an-tsokosoko amin'ny fampidirana ny olona amin'ny fampiasana ny entanao. Raha tsy izany, dia izy no tsara synergie amin'ny media sy ny tambajotra sosialy. Profiteer hiervan. Post HD, dikany sary eo amin'ny pejy media sosialy.
Ho an'ny bilaogiko manokana dia mila mahazo rohy mankany amin'ny tranokalanao ianao. Ampifamadiho ny safidy, jereo ny sary miaraka amin'ny sary. Manoratra ny maha-zava-dehibe ny tsirairay
Mifandray amin'ny tranonkala / blaogera
Raha ny fampitam-baovao mahazatra dia mamorona amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra, ary raha ny zava-misy dia
Eritrereto hoe ny tranokalanao mora mora no navigateur
Raha ny ankamaroan'ny pejy dia afaka manitsy mora kokoa ny navigateur. Ny manam-pahaizana dia nanazava fa tsy misy 2 ny pejy fanampiny tokony hampiasaina. Amin'ny ankapobeny, dia tsara ny manapa-kevitra ny hanao sécurités sy ny sokajy vitsivitsy.
Ny sary tsara tarehy dia tsy natao ho an'ny fampahalalam-baovao sosialy fotsiny. Ny tranokalanao dia tokony hampiseho mazava tsara. Ny sary sy lahatsary dia mamaritra kokoa ny fitenenana amin'ny lahatsoratr'izy ireo.
Hisoratra anarana ho anao ny tranokala ao
Ny fijerena famantaranandro dia ny fomba fanao faran'izay tsara indrindra amin'ny Google. Ny fahasamihafana ara-pahasalamana dia miasa irery ho an'ny tranokala kely fotsiny amin'ny voalohany voalohany amin'ny lisitra finday. Jereo ny sarimihetsika maromaro miaraka amin'ny valiny, 5-drii-tsary ary sary. Ny asa mahagaga.
Manorata ekipa mba hifanaraka amin'ny mpifaninana. Tadiavo ireo tranonkala handinihana ny fitaovana ampiasaina amin'ny Web CEO hanadihadiana ireo paikady Source . Probeer erachter te komen:
raha te hahafantatra ireo zo ireo ianao
mamono ny domeinen die ze terugkoppelen naar
ny hetsika rehetra ataon'ireo haino aman-jery sosialy